यस्तो रहेछ जेसीबी डोजरको पहेँलो रङ हुनुको कारण – Kalika News
यस्तो रहेछ जेसीबी डोजरको पहेँलो रङ हुनुको कारण
२५ भाद्र २०७६, बुधबार १२:०१ , मा प्रकाशीत
तपाई हामीले डोजर भन्ने बित्तिकै पहेलो रंगको हुन्छ भन्ने सोच्छौं । बिशेषगरी निर्माण ब्यवसायमा प्रयोग हुने जेसीबी लेखिएका डोजर, एस्क्याभेटरमा लगाईएको रंग पहेलो हुने गर्दछ । तपाईहरुलाई थाहा नभएको हुन सक्छ की जेसीबी लेखिएका डोजर, एस्क्याभेटरमा किन भनेर पहेलो रंगको प्रयोग गरिएको हुन्छ ? जेसीबी निर्माण उपकरण निर्माता एक कम्पनी हो ।
बेलायतको स्टाफोर्डशायरमा मुख्यालय रहेको जेसीबीको नाम यसका आविष्कारक जोसेफ सायरिल बमफोर्डको नामको छोटकरी रुप जे।सी। बी राखिएको थियो । जेसीबीले बेलायतको पहिलो कम्पनी हो, जसले भारतमा आफ्नो पहिलो कारखाना खोलेको थियो ।
सुरुवातमा जेसीबी मेसिनहरु सेतो रङका हुने भए पछि पछि यसको रंग रङ पहेँलो बनाइएको थियो । जेसीबीको रङ पहेँलो हुँदा निर्माण तथा उत्खनन स्थलमा यो मेसिन टाढैबाट प्रष्ट देखिने हुदा हिँडडुल गर्ने तथा अन्य मानिसलाई समेत जानकरी प्राप्त भई सतर्क हुन सहयोग र्पुयाउँने भन्दै यसको रंग पहेलो बनाएको थियो । एजेन्सी
के तपाईको कपाल झर्ने समस्या छ ? यस्तो छ घरेलु उपाय